Webinar: Miezaha ho feno fankasitrahana amin'ny fotoan-tsarotra (30 septambra 2020) - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Septambra 18, 2020 Septambra 18, 2020 Elisabeth Uncategorized
Webinar: Miezaha hanana fankasitrahana amin'ny fotoan-tsarotra (30 septambra 2020)
Date: 30 septambra, 1: 30-2: 30 hariva EST
mpanolotra: Lauren Fitzgerald sy Shareen Grogan
IWCA Mentor Match Programme Webinar Series
Fantatsika rehetra fa fotoan-tsarotra ireo foibe fanoratana sy olona amin'ny ankapobeny. Fa mila mandroso ihany koa isika. Ahoana no anaovantsika izany? Hanomboka amin'ny fikarohana momba ny fankasitrahana isika ary avy eo dia hitantara momba ireo loharano (fananana voafetra tena voafetra) indraindray izay tsy maintsy aorinay. Ireo mpandray anjara dia hiresaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mandritra ny antsasaky ny ora. Ny tanjonay dia ny hanome fanantenana sy hananganana fiaraha-monina.
Ny mpikambana IWCA rehetra dia tongasoa eto, koa aza misalasala manasa ny namanao. Ity dia fivoriana tonga sy mandeha; raha tsy afaka manatrika afa-tsy amin'ny ampahany amin'ny webinar ianao, dia mbola tongasoa anao hiaraka aminay.
Mifandraisa azafady amin'i Molly Rentscher (mrentscher@pacific.edu) raha mila fanazavana fanampiny.
Webinar fanombanana (14 septambra 2020)
2020 IWCA Boky miavaka sy olom-boafidy Article